Ololaha Diwaangalinta Doorashada Degaanka oo Bilaabatay – Rasaasa News
Jijiga, Jan 04, 2014 – Ololaha diiwaangalinta doorashada maamulka degaanka oo ka bilaabatay gabalada iyo degmooyinka.
Iyada oo ay afar bilood oo kaliya ka dhiman tahay xiliga la qabanayo doorashada Atoobiya, ayey dawlada dhexe ee Atoobiya mudo hore bilowday ololaha doorashada iyada oo qabanaysa wacyigalin iyo arimo kale oo lagu soo jiidanayo dadwaynaha.
Dhawaan waxay u qabtay dawlada dhexe tababaro iyo wacyigalino la xidhiidha hanaanka doorashooyinka ee ay rabto, ergooyin ka kala socda 9-ka maamulada degaan.
Degaanka Soomaalida oo bilihii ugu dambeeyeyba uu ka jiray muran siyaasadeed iyo qalalaase ragaadiyey hawlaha maamulka Kilalka, ayaa la sheegayaa in maamulku si hoose u magacaabay dadkii soo xuli lahaa xubnaha baarlamaanka ee ku soo bixi doona doorashada la sugayo.
Xubnaha loo magacaabay soo xulida baarlamaanka oo aan wali magacyadooda la shaacin ayaa muddo labo todobaad ah jooga sagaalka gabal ee maamulka Kilalka, kuwaas oo guda galay hawlahooda sida la sheegay.
Maamulka Kilalka ayaa barigii hore kolka ay doorashadu soo dhawdahay magacaabi jiray xisbiyo magac u yaal ah sida Diil-wabi iyo Soomaali galbeed. Waxaase haatan muuqata in ayna jirin baahi xisbi been been ah, maadaama ay diyaar yihiin baarlamaanka iyo xisbiga iyo hogaankuba, balse aan la saadaalin karin cida qaban doonta hogaanka maamulka degaanka Somalida.
Atoobiya: Shidaalka oo Yaraaday oo Qiimihiisu Kacay